TOMATO BUDENOVKA: HABOON IYO DARYEEL FIICAN - NOOCYO YAANYO
Tamaandhada (ama yaanyada) waxay qurxin kartaa miiska, iyada oo lagu darayo dareeraha suuska iyo casriga (beruud kulul oo ballaaran ayaa loo isticmaali karaa oo keliya marka la diyaariyo saladhaha, laakiin sidoo kale qaboojiyaal qabow kala duwan ama cajiimad). Si aad u doorato alaab tayo leh oo si buuxda ugu habboon shuruudahaaga, waxaad u baahan tahay inaad ugu yaraan yartahay is-barbardhigaaga noocyada dhirta. Qaar ka mid ah waa macaan, kuwa kale waxaa loo yaqaan 'dhanaan', laakiin mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa yeelan doona isticmaalkiisa. In this article waxaan ka hadli doonaa kala duwan ee "Budenovka" iyo ogaado sida si habboon u qabato beerto, garter iyo ururinta yaanyada sida.
Noocyo kala duwan "Budenovka"
"Budenovka" waa yaanyo dhexdhexaad ah oo jimicsi ah, muddada bislaanshaha 108-111 maalmood laga bilaabo xilliga beerto. Mararka qaarkood dhirta ayaa gaareysa 150 cm oo dherer ah.
Noocyada kala duwan ee yaanyo ayaa helay sumcad ballaadhan sababtoo ah iyada oo aan la qabin shuruudaha beerashada iyo daryeelka, iyo sidoo kale heer sare oo iska caabin ah oo ka yimaada sharraxaad dambe iyo cudurrada kale. Tamaandho waxay keenaan dhalid aad u sareeya waxayna leeyihiin waxyaabo dhadhan fiican leh.
Marka la tilmaamo noocyada kala duwan ee yaanyada, waa in la ogaadaa in miraha ay yihiin kuwo waaweyn iyo fareeshka, miisaankoodu yahay 0.2-0.4 kg kasta (mararka qaarkood waxaa suurtogal ah in la beero yaanyada oo miisaankeedu yahay 0.7 kg). Waxay leeyihiin midab casaan, midab-jecel iyo dhadhan macaan.
Ma taqaanaa? Waxay ahayd qaabka tamaandhada oo magaceeda u bixiyay, maaddaama ay muuqaal ahaan u egtahay halyeeyga Budenovka.
Tamaandhada "Budenovka" waxaa loo isticmaali karaa labadaba cusub iyo gasacad, iyo xilliga xagaaga waxay yihiin kuwo lagama maarmaan saladh.
Si aad u diyaariso yaanyada xilliga qaboobaha, waxaad isticmaali kartaa miraha cabbir kasta: kuwa yaryar waa la wada xiraa, kuwa waaweynna waxaa lagu baari karaa juuska ama suugada yaanyo.
Sida loo soo qaado iyo loo diyaariyo miraha beeridda
Si aad u ururiso abuurka dooran yaanyo badan oo caafimaad qaba (sida ugu casaan iyo fareeshka), oo si buuxda u bislaaday geedka canabka ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aad seegtid waqtigan oo aad soo qaadatid dhammaan miraha, waxay ku ridi karaan daaqadaha.
Abuurka waxaa laga saaraa yaanyo leh saxarka, ka dibna ku rid weel dhalada ah oo 2/3 mugga ayaa ka buuxsamey biyo. Ka dibna weelka ama dhalada waa in lagu tagaa meel kulul ilaa 5-7 maalmood. Inta lagu jiro muddadan, hannaanka halsano ayaa ka dhici doona taangiga, ka dib markii wakhtigaas la soo dhaafay, ka dib dhammaan waxyaabaha kusabsan qashinka si fiican ayaa loo dhaqay oo la qalajiyey.
Dalagyada dabacsan ee qalalan ayaa lagu kaydiyaa weel dhoobo ah, kaas oo ka buuxsamaya qeyb ka mid ah mugga. Si aan loogu jahwareerin noocyada kala duwan, waa inaad ku dhejisaa calaamad magaciisa iyo taariikhda ururinta abuurka.
Marka loo diyaariyo abuurka beerashada, waxaa lagama maarmaan ah in la fahmo in geedo macquul ah oo Gagaashan si fiican. Sababtan awgeed, ka hor intaadan dhulka ku beerin, shaybaarka habboon waa in la soo xushaa oo la baaraa. Inta badan waxaa lagu fuliyaa mid ka mid ah labo siyaabood:
Manhajka, marka aad si taxadar leh u baarto dhammaan abuurka oo si muuqata u go'aamiyaan shayada wanaagsan iyo kuwa xun.
Iyada oo caawinta cusbo miisaanka guud: dhammaan geedo loo diyaariyey waxaa la dhigaa 1.5% milix cusbo, ka dib markii ay kormeeraan taas oo iyaga ka mid ah ay ku degi doonaan hoose ee dheriga. Shinnida caleemaha ahi waa mid aan habboonayn, laakiin kuwa ku yaal hoose ayaa si dhammaystiran u caafimaad qaba waxayna ku habboon yihiin doorka abuurka.
Abuuraha si haboon loo diyaariyey waxay ku haboon yihiin beeritaanka 10-12 sano.
Waa muhiim!Siinta calaamadaha muuqda ee cudurka ama kala duwanaanshaha inta ka hadhay midabka ama cufka waa in isla markiiba laga soocaa shaybaar caafimaad leh.
Koraaya geedo kuu gaar ah
Tamaandho waxaa lagu koray habka rassadny, laakiin ka hor inta aan la dhigin dhulka, waa in lagu qooyay xal daciif ah ee kaneecada (potassium permanganate). Diyaarinta geedo bilaabmaa marka heerkulka ciidda uusan ka yarayn + 2 ° C (Maarso-Abriil). Habka beereedka wuxuu ka kooban yahay laba marxaladood: diyaarinta ciidda iyo abuuritaanka tooska ah ee abuurka.
Xiiso leh Marka hore, yaanyo kala duwan "Budenovka" ayaa loo siiyay si qumman u koraya ee lagu koriyo.
Ciidda yaanyada waxay bilaabaan inay diyaariyaan xilliga dayrta. Ujeedooyinkaas, waxaa wanaagsan in la isticmaalo dhirta digada cagaaran, oo loo yaqaan "Bacriminta cagaaran". Way fiicnaan lahayd inaad ku darto Bacriminta organic iyo macdanta si ay carrada u daboosho, una abuurto heerarka ugu wanaagsan ee qoyaanka. Shuruudahaas sidoo kale waxay khuseeyaan diyaarinta ciidda ee aqalka dhirta lagu koriyo.
Maanta "Budenovka" waxaa loo isticmaalaa in lagu beero dhul furan iyo ciidda la ilaaliyo, laakiin iyada oo aan hoy lahayn waxay si wanaagsan u koraan gobollada oo leh jawi caadi ah oo diiran. Xerada dhexe, si aad u hesho goosashada buuxda, yaanyada ayaa si fiican loo koray si ay u koraan tamaandhooyinka kuwaas oo xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo. Goobta furan, dhererka dhirta dhirta waxay gaartaa 1 m, iyo in lagu koriyo ilaa 1.5 m.
Marka dhulku diirran yahay, waxaad bilaabi kartaa tamaandhada. Seeds waxaa lagu aasay dhulka oo 0.5 cm, si tartiib ah ku cadaadin ciidda on top. Masaafada u dhexaysa geedo deriska ah waa in aysan aheyn wax ka yar 15-20 cm Haddii geedo ay aad u dhuuntaan, marwalba waa la garaaci karaa marka dhulka la soo dego.
Waa muhiim! Seeds lagu beeray 55-65 maalmood ka hor beerashada furanciid ah (badanaa waxay dhacdaa dhamaadka bisha Maarso - bilowgii Abriil).
Qalabaynta dhirta la kariyey si meel cusub (aqalka dhirta lagu koriyo ama dhulka la furo) waxaa lagu sameeyaa marxaladda muuqaalka koowaad ee burushka ubaxa. Si kastaba ha ahaatee, xitaa in kiiskan, beerto yaanyada waa suurto gal ah kaliya ka dib markii dhaxan ee ugu dambeeyey ee ay soo mareen.
Caadi ahaan, dhirta waxaa lagu beeray fogaan ah 30-40 cm midba midka kale, oo ku qulqulaya qoto dheer oo ah 1.5-2 cm, inkasta oo ay bannaan yihiin inta badan raacaan nidaamka 60x35 cm (masaafada u dhaxaysa safka 60 cm, iyo 35 cm udhexeeya dhirta isku xigta). Si loo hagaajiyo hannaanka carrada iyo abuurista shuruudo dheeraad ah ee yaanyada mustaqbalka, waxaad ku dari kartaa superphosphate iyo humus si ciidda. Duufaankii ugu horreeyay ee dhirta lagu beeray waxaa la sameeyay korka 9-11 caleen, farqiga u dhaxeeya inflorescences waa 3 caleemo.
Daryeelidda yaanyada geedi socodka sii kordhaya
Beerta yaryar ee "Budenovka" (qaab-yar) waxay u baahnaan doontaa dadaal aad u culus, maxaa yeelay geeddi-socodka culus ee xoogga leh waa samaynta iyo xirashada duurka, taas oo aad u muhiim ah dhirta aqalka dhirta lagu koriyo.
Xitaa ma aha xilliyada ugu guulaha badan, waxaad ku xisaabtami kartaa dhalidda sare ee yaanyada kala duwan. (waxaa lagu qaddariyaa tayada soodhada "salad"). Horumarinta iyo koritaanka sii kordhaya ee baadiyaha, waxaa lagama maarmaan ah in la xoojiyo waqtigeeda (hab kasta oo baadiyaha ah ayaa ku xiran tiirarka lagu riixay dhulka).
Marka ugu horeysa ee aad ku beeri geedo dhulka, dhirta u baahan tahay in la waraabiyo 2 jeer toddobaadkii, laakiin waqti ka dib, waraabinta waxaa la yareeyn karaa hal mar 7-10 maalmood. Xaaladdan oo kale, qaybta hoose ee geedka waxay u baahan tahay in la qoyo, halka dushooda aysan jecleysan "qubeys" aad u badan. Ka dib markii la waraabiyo, waa inaad isla markiiba dabcisaa carrada oo ka saarto caleemaha hoose.
Haddii ay tahay mid aad u kulul dibadda, si looga fogaado in la qalajiyo ciidda, saldhigyada duurka waxaa lagu daboolay dushooda ama cawska. Budenovka waxay u baahan tahay biyo dhexdhexaad ah laakiin joogto ah, iyo inta lagu jiro marxaladda ubaxa, sameysida ugxan-sidaha iyo abuurka dambe ee miraha waa in la kordhiyaa.
Ma jiro wax muhiim ah oo ka mid ah quudinta wakhtiga ah ee yaanyada. Walxaha ugu muhiimsan ee kobaca tamaandhiga waa fosfooraska iyo potassium, taas oo macnaheedu yahay in superfosphate ama kaabiga qolofta ukunta ay ku haboon tahay dhirta. Quudinta koowaad waxaa la sameeyaa aan ka horeyn 2 toddobaad ka dib markaad transplanting.
Waa muhiim! Ha ku dhaafin boodhka mullein ama Bacriminta nitrogen, sida yaanyada waxay ka dhalataa dufanka iyaga ka sameysan, samaynta caleemo badan iyo caleemaha dhinaca, halka burushyada ubaxa muuqaal yar yihiin.
Maaskarada iyo duurka hills
Pasony ee tamaandhada, oo ay ku jiraan noocyada kala duwan ee lagu sharraxay, waxay ku lugleeyeen jajabinta (ruxidda) tallaabooyin aan loo baahnayn (caleemaha lateral ee ka soo baxa axils caleen). Maqnaanshahoodu wuxuu keenaa Bisaylkiisa hore ee miraha, sababtoo ah dhammaan xoogagga geedka ayaa lagu kharash gareeyay.
Sababtoo ah hilling, taas oo lagu sameeyo laba-jajab ee noocyo yaanyo "Budenovka", xididdada dheeraad ah si dhakhso ah u muuqdaan in dhirta, qoyaan waa la ilaaliyaa iyo kululaynta nidaamka xididka waxaa looga hortago kulaylka xad dhaafka ah. Ka dib markii dogobka hilling, waxaa badanaa lagu rusheeyey hay ama caws.
Kala duwanaanta "Budenovka" waxaa loogu yeeri karaa mid culus, sababtoo ah waxa uu si gaar ah ugu baahan yahay sameynta duurka iyo xargaha. Khafiif ah oo jilicsan oo afkoda ah ayaa badanaa ku xoqaya miisaanka miro ama xitaa jebinta, sidaas daraadeed qoryaha geedku waa mid ka mid ah geeddi-socodka ugu muhiimsan ee dhammaan marxaladaha daaqsinka, taas oo u baahan doona xoogaa dadaal ah. Meelaha la jiido dhulka ayaa aad ugu fiican kaalinta taageerada. Xaabood waxay xirxiraan marka ay koraan, iyada oo la tixgelinayo dhererka ugu badan ee dushooda 1.5 mitir.
Waa muhiim! Haddii dhirta la isku qurxiyo ee sare, ka dibna laan kasta ayaa loo xiraa taageero.
Qaar ka mid ah dadka degaanka xagaaga ayaa tixraacaya noocyada kala duwan ee Budenovka sidii tamaandhada goosashada, ka dibna geedi socodkan wuxuu bilaabmaa bartamihii July. Fruiting wuxuu soconayaa 2.5-3 bilood wuxuuna ku dhamaanayaa bilawga xilliga dayrta.
Muuqaalka muuqaalka ah ee tamaandhadani waa waxa loogu yeero "ka soocaya gudaha". Xitaa haddii yaanyo uusan u muuqan mid daba-gala dibedda, gudaha waxaa si buuxda u bislaaday. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro yaanyo ka soo duurka ee wajiga of bislaalka brown, taas oo dedejinaya Bisaylkiisa ee inta ka dhiman yaanyada.
Dhirta aqalka dhirta ayaa si dhaqso ah u bisilaa, laakiin yaanyada lagu beeray dhul furan waxay u baahan yihiin wakhti dheeraad ah (sida caadiga ah tamaandhadani waxay bilaabaan inay kobcaan kaliya dhamaadka July).
Celceliska caleenta buqcadda laga bilaabo 4 ilaa 5 kg oo miraha ah, oo ay sabab u tahay caabbinta sare ee saameynta phytophthora, dhammaantood waxay ku koraan caafimaad iyo xoog. Haddii aad si fiican u daryeeshid tamaandhada, waxaad awoodi doontaa inaad kor u qaaddo ilaa 7 kg oo yaanyo ah xilli xagaa ka mid ah baadiyaha. Interestingly, dhammaan miraha kala duwan ee "Budenovka" waxay leeyihiin qiyaastii isku mid ah, leh qashir dhadhan macaan iyo sanduuq aad u yaryar.
Qodobo waxtar leh ee yaanyo "Budenovka"
Sidaas, waxaan ogaannay in xitaa aan fiicnayn noocyo yaanyo "Budenovka" waa la cuni karaa, tan iyo markii ay hore u bislaadeen. Yaanyadaasi waxay u fiican yihiin saladh, iyo haddii aad rabto in aad u isticmaasho casiirka ama maraqa, ka dibna ka tag midhaha miraha 2-3 maalmood meel bannaan.. Inta lagu jiro waqtigan, waxay heli doonaan midabka caadiga ah ee casaan iyo noqdaan jilicsan. Intaa waxaa dheer, tamaandhada kuwan waa mid aad u fiican ilaalinta (waxaa wanaagsan in la doorto miraha yar) ama xitaa xakamee.
Kala duwan tani waa mid hodan ku ah fitamiinada iyo xubno waxtar leh, laakiin faa'iidada ugu weyn waa maqnaanshaha alerjiyada. (xitaa xasaasiyaduhu way ku raaxaysan karaan iyagoon cabsigelin caafimaadkooda). Isticmaalka miraha cusub waxaa ku jira maaddada "gastrointestinal tract" iyo hab-nololeedka cadaadiska dhiigga, taasoo saameyn wanaagsan ku leh xaaladda guud ee jidhka.
Iyada oo dadaal yar, waxaad ku raaxaysan kartaa goosashada cajiib ah ee miraha delicious.